Hello Nepal News » रोचक–रमाइलो
४ हजार वर्षअघि बलेको यो आगो, जुन अझै निभेको छैन !
२० माघ २०७७, मंगलवार ०५:५७
झट्ट सुन्दा यो कुरा एकदमै हावारी लाग्न सक्छ । तर, यो रोचक यथार्थ हो । तस्बिरमा देखिएको आगो ४ हजार वर्षदेखि लगातार बल्दै आएको छ । र, जुन अझैसम्म पनि निभेको छैन । हो, यो वास्तविकता हो । अजरबैजानको यानार डागको एक पहाडमा बलेको आगो ४ हजार वर्षदेखि निभेको छैन । यो ठाउँ ‘आगोको भूमि’ भनेर पनि विश्वभर चर्चित छ । त्यस.....
चीनको अर्को चमत्कार : जमिनमुनि बनायो १८ तले पाँचतारे होटल !
२७ पुष २०७७, सोमबार १४:२४
हाम्रो छिमेकी देश चीनलाई चमत्कारको देश पनि भनिन्छ । जुन देश नयाँ–नयाँ आविष्कार, निर्माण र विकासले चर्चित छ । उसले यस्ता काम गर्छ, जुन सुन्दै पनि दुनियाँ चकित हुन्छ । त्यही चीनले अर्को चमत्कार गरेको छ । त्यहाँको सांघाईस्थित सोंगजियांग क्षेत्रमा अहिले एक पाँचतारे होटल बनाइएको छ, जुन जमिनभन्दा निकै तल छ । यस्तो.....
जहाँ महिलाको कपाल हेर्नकै लागि लाखौं पर्यटक पुग्छन् !
२३ पुष २०७७, बिहीबार १६:५७
नेपालको उत्तरी छिमेकी देश चीन थुप्रै कुराले चर्चित छ । खास गरी चीनलाई कतिले ‘चमत्कारको देश’ पनि भन्छन् । चीनमा भएको नाटकीय आर्थिक प्रगति र विकास मात्रै नभएर सो देश विभिन्न आश्चार्यजनक र रमाइला कुराहरूले पनि चर्चित छ । चीनमा कतिपय यस्ता रोचक तथ्याहरू छन्, जसलाई मानिसले पत्याउनै कठिन पर्छ । यहाँ त्यसमध्ये.....
आज शनिबार : यस्तो हुन्छ शनिबार जन्मिएका मानिसको आनीबानी र भाग्य
१८ पुष २०७७, शनिबार ०५:०८
मानिसको व्यवहार, चालचलन, स्वभाव तथा अन्य गतिविधि मानिस जन्मेको बार, महिना र समयले निर्धारण गरेको ज्योतिष शास्त्रको दाबी छ । ज्योतिषहरूले मानिसको जन्मबार एवं जन्मेको समयले उसको स्वभाव र चरित्र निर्धारण गर्ने बताउँदै आएका छन् । यस्तैमा आज हामी शनिबार जन्मिएका मानिसहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ त भन्नेबारेमा.....
दैनिक जीवनमा तपाईं–हामीले प्रायः बिर्सने यी १० कुरा
२६ मंसिर २०७७, शुक्रबार १७:१४
आधुनिक जीवनशैलीको व्यस्त र हतारो दैनिकीमा मानिसले सबै कुरा ठीकठाक गर्न वा राख्न सक्दैनन् । वा भनौं, उनीहरूको दैनिक कार्यतालिका र सूचीमा केही न केही छुटिरहेका हुन्छन् नै । गर्ने कुरा गर्न बिर्सिरहेका हुन्छन् । ती साना–साना भए पनि आवश्यक कुरा हुन्छन् । हालै एक अध्ययनले यस्तो देखाएको छ कि, मानिसले दैनिक.....
२३ मंसिर २०७७, मंगलवार १७:१०
ज्योतिषशास्त्र अनुसार बूढी औंला सुन्दर हुने व्यक्ति बुद्धिमान र चतुर हुन्छन् । यिनीहरू चलाखीपूर्वक काम सम्पन्न गर्छन् । हाम्रो हातको बूढी औंला तीन भागमा बाँडिएको हुन्छ । प्रथम भाग सबैभन्दा माथिल्लो, दोस्रो मध्यम र अन्तिम भाग । प्रथम माथिल्लो भाग यदि कुनै पनि व्यक्तिको बूढी औंलाको माथिल्लो भाग लामो.....
यो हो सुनले बनेको संसारकै पहिलो होटल : यस्ता छन् विचित्रका विशेषताहरू
२ श्रावण २०७७, शुक्रबार १५:०८
यो दुनियाँ विचित्र नै विचित्र कुराले भरिएको छ । संसारका कतिपय तथ्य त पत्याउनै मुस्किल हुन्छ । तर, ती साँचा हुन्छन् । आज यहाँ त्यस्तै एक रोचक तथ्यबारे चर्चा गरिएको छ । आज यहाँ एक विचित्र होटलबारे चर्चा गर्दैछौं । संसारमा थुप्रै होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू छन् । कतिपय सुविधाले चर्चित छन् भने कपिय बनौट, स्थानका.....
समुद्रको बीच टापुमा १ अर्ब ११ करोडको घर बिक्रीमा : हेरौं १० तस्बिरहरू
३० असार २०७७, मंगलवार ०७:४१
घर मानिसका लागि आधारभूत आवश्यकता हो । घरले मानिसलाई घाम, पानी, हावाहुरीबाट बचाउने गर्छ । मानिस आफ्नो घरमा सुखसँग आरामदायी रूपले जीवन बिताउन चाहान्छन् । गरिब वा धनी भए पनि सबैका लागि घरको पहिलो महत्त्व यही नै हो । कुनै बेला अमेरिकन नागरिक म्यारिलिन मोनरोए नामका व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको रूपमा रहेको सानो.....
पानीमाथि बसेको संसारकै यस्तो अनौठो बस्ती !
२५ असार २०७७, बिहीबार १४:०९
भनिन्छ, संसार विचित्र नै विचित्र कुराले भरिएको छ । आजसम्म हामीले एकदमै अनौठा–अनौठा घटनाबारे सुनेका छौं होला । तर, के यस्तो मानिसको समुदाय जो पानीमाथि बस्ती बसालेर बस्छ, यसबारे कहिल्यै सुन्नुभएको छ ? यदि छैन भने, आज यसबारे थाहा पाउनुहुनेछ । अचेलका मानिसका अनेक इच्छा र रहर हुन्छन् । घरमा बस्न छाडेर सामुद्रिक.....
यस्तो गाउँ जहाँ महिलाको कपाल हेर्नकै लागि लाखौं पर्यटक पुग्छन् !
१९ असार २०७७, शुक्रबार ०६:५८
चीनको गुआन्ग्झी प्रान्तस्थित हुआन्गुलो गाउँ लामो कपाल भएका महिलाको गाउँ हो । उक्त गाउँका ८० जना महिला यस्ता छन्, जसको कपालको लम्बाइ १.४ मिटरदेखि २.२ मिटरसम्म छ । महिलाहरूको लामो कपालकै कारण यो गाउँ संसारमा चर्चित छ । महिलाको कपाल हेर्नकै लागि वर्षेनी ८० हजार पर्यटक उक्त गाउँमा पुग्ने गरेका छन् । महिलाहरू.....